Fandaharana: The Psychology of Computers | Avy amin'ny Linux | ChrisADR | Avy amin'ny Linux
ChrisADR | | fandaharana, Tutorials / Manuals / Tips
Mifamatotra akaiky amin'ny fandaharana isika rehetra, na amin'ny mpampiasa izany, na amin'ny maha administratera, amin'ny maha programmer azy, fa amin'ny farany dia zavatra izay hifandray bebe kokoa amin'ny fiainantsika mandritra ny taona maro.
Ato amin'ity lahatsoratra ity (ny fiandohan'ny andiany kely kasaiko hamoronana), Te hizara aminareo hevitra vitsivitsy momba ny zavatra hitako momba ny fandaharana nandritra ny taona maro aho. Tsy milaza ho matihanina ara-teknika loatra aho, hanazava ny antony taty aoriana. Saingy ny tanjoko dia ny hampisehoan'izy ireo an'izao tontolo izao amin'ny masoko, ary raha tian'izy ireo ny fijeriny, dia avelao izy ireo handinika azy kely 🙂
Hanafika ny teboka tsotra indrindra aloha aho alohan'ny hidiranao amin'ny antsipiriany.
1 Fa maninona aho no tsy hanao lahatsoratra ara-teknika?
2 Ilaina ny herinaratra
2.1 Ny olana
4 Rehefa miantso ny te hahafanta-javatra ...
6 Tsy diso ny solosaina
7 Ny zava-drehetra dia psikolojia
8 Mianara mamaky saina
10 Ho famintinana
Fa maninona aho no tsy hanao lahatsoratra ara-teknika?
Eny, ho an'ireo izay namaky ny lahatsoratro baiko linux tsara indrindra, ho fantatrao kely ny anton'io fifantohana io. Miova hatrany ny teknolojia, ary raha manoratra zavatra aho anio, raha raisina tsara ny lahatsoratra dia tsy maintsy manavao ny vaovao foana aho. Amin'ny fiteny mahazatra indrindra ankehitriny, ny hany azo antoka dia ny fanovana. Ny tiako holazaina dia izao (ary afaka manaporofo fa marina ireo mpandrafitra fandaharana) ny rafitra dia mitombo sy miova hatrany amin'ny atiny, izany dia satria misy ny lesoka, azo heverina ho tsotra ny sasany bibikely, raha ny hafa kosa mety ho lasa fahalementsika. Izany no antony mahatonga ny fanoratana lahatsoratra momba fiteny iray manokana, anio, hanome antoka ahy fa mety hahasoa mandritra ny volana vitsivitsy, amin'ny tranga tsara indrindra iray na roa taona, saingy tsy izany no hevitra
Ilaina ny herinaratra
Ianareo izay nanao fikarohana kely momba ireo fiteny fandefasana rindrambaiko ambany dia ho fantatrareo fa miverina amin'ny herinaratra avokoa izy rehetra. Taloha, ny fandaharana dia natao tamin'ny haavon'ny fitaovana, midika izany fa ireo famantaranandro taloha, calculatera, ary fitaovana maro hafa, dia afaka nanatanteraka ny anjarany tamin'ny alàlan'ny fandaharana Hardware.
Ny fanovana fandaharana fitaovana dia lafo ary sarotra 🙂 (farafaharatsiny izany no nolazain'izy ireo tamiko 🙂 ). Izany no antony nipoiran'ny mpikirakira, izay manaisotra ilay sosona fikirakirana mba hanomezana baiko vitsivitsy hahafahantsika manao izay rehetra azo atao amin'ny alàlan'ny fikirakirana fitaovana, amin'izao fotoana izao ao amin'ny sosona fitaovana ihany. rindrambaiko.
Ireo mpikirakira ankehitriny dia manana lahasa voafetra, antsoina toromarika amin'ny boky maro. Ireo dia ahafahanao manao ireo fiasa tena lehibe indrindra azon'ny hardware atao, ary ny fanentanana ny vaovao amin'ny alàlan'ny fahatsiarovan'ny solosaina.
Ny fisoratana anarana dia toerana iray itehirizan'ny mpanamboatra fampahalalana hahafahany manatanteraka asa amin'ny kernel, miankina amin'ny maritrano afaka manana habe sy filaminana hafa izy ireo, saingy amin'ny fomba tsotra, ny asany dia ny mitahiry angona izay milaza amin'ny mpikirakira ny iray amin'ireo manaraka ireto karazana asa ireto: mamindra ny angona, ny arithmetika sy ny lojika ary ny fifehezana ny mikoriana. Ny zavatra rehetra dia azo fintinina amin'ireto karazana fiasa ireto.
Ireo mpikirakira dia miasa amin'ny ambaratonga roa, midika izany fa takany ihany 0et 1eny 🙂. Zava-misy mahaliana eto 😀tadidinao ny alalana GNU / Linux? tsara,efa nanontany tena ve ianao hoe ahoana ny fahafantaran'ny mpikirakira ireo fahazoan-dàlana ireo? Tsotra 🙂 binary. Amin'ny ambaratonga ambany indrindra dia hahatakatra ny fahazoan-dàlana ho mpandimby ny 0 sy 1 ny mpikirakira, ary izany no antony mahatonga ny octal izay noforoninay hanana ny soatoavina 1 famonoana ho faty, 2 ho an'ny famakiana ary ny 4 ho an'ny fanoratana. Ho an'ireo afaka mamaky binary dia ho takatr'izy ireo fa:
Nametraka ny famakiana, ny fanoratana ary ny fahazoan-dàlana ho an'ny vondrona izy ireo ny hafa eo am-pametrahana ny fampisehoana sy ny famakiana ho an'ny vondrona vondrona ary vakio fotsiny ho an'ny tompona fisie. Ho an'ireo liana fatratra, ny telo farany 1 dia mampihetsika ny setguid, setuid ary ny sticky bit. Raha tsy fantatrao hoe inona ity binary ity dia azoko atao ny manazava azy amin'ny lahatsoratra hafa, raha tsy fantatrao izany momba ny setuid, setgid ary ilay miraikitra, avelako ho anao 😉 fa azoko hazavaina any an-kafa ihany koa raha ilaina izany.
Rehefa miantso ny te hahafanta-javatra ...
Raha nanaraka ahy teto ianao dia tokony hanontany zavatra vitsivitsy ny fahaliananao, ny voalohany tiako hovaliana (ary angamba ilay hany avelan'ity lahatsoratra ity amiko satria efa manoratra betsaka aho) dia: Raha mitovy ny antso, maninona no tsy mitovy ny fandaharana?
Ny programa dia ny fahaizanao mianatra mamaky saina 🙂 Te-hanomboka ity fizarana ity aho miaraka amin'ny teny novakiako efa ela lasa izay, hoy i Edsger Dijkstra:
Raha ny debugging dia dingan'ny debugging, dia tsy maintsy ny programa ny fampidirana azy ireo
Ary tsy hitako ny fomba tsara kokoa hanazavana izany rehetra izany 🙂 fa maninona no ny programa no mampiditra ny lesoka? mihoatra ny iray no hanontany tena amin'ity indray mitoraka ity. Tsotra ny valiny, satria olombelona ny saintsika, ary manao fahadisoana ny olombelona 🙂 voajanahary amintsika izany, ary raha mbola misy ny olombelona eto ambonin'ny planeta.
Tsy diso ny solosaina
Isika no manao fahadisoana, ny ekipa dia hametra ny tenany hamerina izay lazaintsika azy ireo, tsy mandray na inona na inona izy ireo, tsy mandika na inona na inona izy ireo, tsy manohitra na inona na inona fa mamaky sy mihetsika fotsiny. Izany no antony namakiako zavatra toy izao tao amin'ny boky C iray hafa:
C dia fiteny tsy mahalala fomba, afaka manao zavatra betsaka amin'izany ianao, fa tsy hanakana anao tsy hitifitra ny tongotro mihitsy izany raha te hanao izany ianao, na hiteny izany ianao.
Ity dia fahamarinana somary mahaliana This Satria rehefa miasa amin'ny ambaratonga ambany toy izany dia azo atao ny manimba ny hetsika maro izay tanterahina, zavatra tsy mitranga amin'ny fiteny avo lenta kokoa, satria ny fisorohana ny lesoka antitra izy ireo.
Ny zava-drehetra dia psikolojia
Ny fiteny, ny rafitra, ny programmer, dia manaja sy manaraka karazana filozofia, ary raha tsy izany dia tsy manana ho avy tena mampanantena izany. Isika izay miasa amin'ny UNIX sy ny derivatives dia mety hahalala ilay andianteny taloha:
Manaova zavatra iray, ary ataovy tsara.
Ity filozofia ity dia ilay manaraka tetik'asa sasany toy ny kernel, fiasa kely izay tsy manao afa-tsy zavatra iray ihany, fa ataovy izay tsara indrindra vitany
Raha mandeha amin'ny fiteny hafa isika, dia samy hanana ny asany sy ny tanjony ny tsirairay, ny sasany hanaiky kokoa ary ny hafa teritery kokoa, fa samy manaraka ny fomba fisainany avy.
Mianara mamaky saina
Misy fomba fiteny mahazatra eo amin'ireo mpandahatra programa, fa misy fomba an-jatony hamahana io olana io ihany. Marina izany, saingy misy zavatra lalindalina kokoa momba an'io lafiny io. Ny famakiana kaody loharanom-pahalalana dia ahafahanao mamaky saina - tsy ny saina fotsiny, fa ny sain'ny programmer (na programmer) izay nanoratra azy. Izy io dia karazana diary virtoaly sy lalina 🙂 mamela anao hahafantatra lalindalina ny sain'ny mpamorona, ary raha misy tetikasa lehibe dia mamela anao hahita ny fomba nitomboan'ny fisainany lojika sy fitsikerana rehefa mandeha ny fotoana. Zavatra tsy manam-paharoa ary tena mamelona ny sain'ny faralahy, satria azonao fantarina ny làlan'ny olona tsara indrindra nahita azy 🙂
Ity no dingana voalohany amin'ny andiany iray izay antenaiko fa hanampy anao hieritreritra amin'ny fomba hafa momba ny kanton'ny fandaharana, ary manasa anao mihitsy aza handinika ireo hevitra mamela anao hanatanteraka ilay kaody nosoratanao efa in-jato angamba, fa tsy nijanona nieritreritra izay tena ataony izy ireo. Ary ho an'ireo izay mbola tsy nanomboka fandaharana, fa te, mba ho afaka hanao laharam-pahamehana kely amin'izay tena zava-dehibe tokony ho fantatra reet Miarahaba
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Fandaharana: Ny Psychology an'ny Solosaina
Javier G. Delgado dia hoy izy:
Lahatsoratra iray tena mitandrina momba ny feon'ny fieritreretana miresaka (amin'ity tranga ity) amin'ny fandefasana fandaharana amin'ny fiteny vaovao izay mandrafitra lalindalina kokoa ny fanohanako.
Valiny tamin'i Javier G. Delgado
Salama Javier, misaotra betsaka 🙂 Heveriko fa tena zava-dehibe izany satria efa naniry ny hampianatra ahy hamoaka kaody fotsiny izy ireo, ilay Ctrl + C malaza ... Ctrl + V 🙂 saingy tsy navelako hotaritaritro na oviana na oviana io, na dia io aza no olana tsotra indrindra eto an-tany Aleoko manoratra azy toy izay maka tahaka azy amin'ny olon-kafa, mahatonga ahy hahatsapa fa noforoniko io.
Balua dia hoy izy:
Efa niandry ny toko manaraka aho dia najanoko ny fandaharana efa ela lasa izay, ary mieritreritra aho fa hahita amin'ny toko manaraka ny antony iray hanapahako hevitra, raha ny marina, amin'ity toko ity dia esoriko ny satroko.
Valiny tamin'i Balua
Salama Balua 🙂
Eny, hanana zavatra ho an'ny manaraka aho. Somary manahirana ny manafatra ny zava-drehetra amin'ny fomba mety hanarahana ny kofehy avy amin'ny lahatsoratra rehetra, fa hiezaka ny hanana an'io (sy ny maro hafa izay nanontany ahy) tsy ho ela aho. Misaotra tamin'ny hevitrao. mahafaly
Anders dia hoy izy:
Vatosoa iray amin'ny lahatsoratra! Manantena aho fa ny manaraka ...
Valiny tamin'i Anders
Tongava Administrator Linux